Arsivan'ny tontolo iainana - fototra afrikhepri
Fifandraisana SOKAJY TONTOLO IAINANA
Mamorona fomba revolisionera i Afrika Afrikana hanadiovana ny rano maloto amin'ny solika
I Ghana dia manangana toby famokarana herinaratra lehibe indrindra eto Afrika
Notokanan'i Ghana ny toby famokarana herinaratra lehibe indrindra eto Afrika tamin'ny Oktobra 2015. Miaraka amin'ny fahafahan'ny famokarana 155 MW, dia hamarana ny olana amin'ny tsilo ny firenena ...
Wecyclers dia manolotra serivisy fanodinana zava-baovao amin'ny alàlan'ny bisikileta sy rafitry ny solosaina. Izy io dia mifanaraka amin'ny filan'ny mponina amin'ny toerana tsy ara-potoana. Mandray anjara amin'ny ...
Ary i Afrika koa dia nanana ny revolisiona maitso?
Ny tetik'asa Solar Roadways dia misy ny fandrakofana arabe, sisin-dàlana ary toeram-piantsonan-tseranana miaraka amin'ny takelaka misy fakan-tsarimihetsika. Tsara ny panneaux solaires, fa ny fametrahana goavana dia mitaky fotoana ...
Ireto mpahay siansa ireto izay mamadika plastika ho menaka maloto
Enina taona lasa izay, ny tanora amerikana SME Agilyx dia nanangana teknika iray ahafahan'ny plastika rehetra hikarakarana azy hahavita menaka crude tena tsara ....
Payeng, ilay lehilahy namboly ala irery
Nanomboka ny tantara 30 taona lasa izay tao amin'ny Nosy Majuli, India. Ny habakabaka fasika mitsingevana eny amoron'ny renirano dia iharan'ny tondra-drano matetika, ...
Angovo Photovoltaic, turbin-drongony, fiara famonoana ... any Frantsa, zara raha tonga ireto fanavaozana ireto. Ao amin'ny Silicon Valley dia efa lasa izy ireo, ary ireo mpikaroka dia miasa amin'ny "haitao maoderina" ...
Ampianaro ny olom-pirenena Afro mba ho tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainany
Tamin'ny taona 1980 dia nanoratra i René Dumont fa "ny fiarovana ny tontolo iainana dia mitaky fanentanana lehibe amin'ny fanabeazana ankapobeny, toy ny fahadiovana na tsy fanjarian-tsakafo". Io antsoantso fanairana avy amin'ny lehilahy tsy ...
Ny tolo-kevitra 8 Pierre Rabhi hiaina fikarakarana ny fiainana
Ny planeta eto an-tany no hany oasis amin'ny fiainana fantatsika any amin'ny efitra efitra tsy manam-paharoa. Karakarao izy, hajao ny fahamendrehana ara-batana sy biolojika, araraoty ...
Pierre Rabhi - Ny fahononan-tena mahasambatra anao (Video)
Pierre Rabhi dia iray amin'ireo mpisava lalana amin'ny fambolena ekolojika any Frantsa. Miaro ny lalam-piarahamonina iray izay manaja kokoa ny olona sy ny tany ary manohana ny fampandrosoana ny ...
Ny bisikileta vaovao dia mampiseho ny fisehoany eny an-tsena: ny bisikileta bamboo
Misy bisikileta marika vaovao mipoitra eny an-tsena: Ny bisikileta volotsangana. Ny hevitra hananganana bisikileta amin'ity fitaovana ity dia foto-kevitra nipoitra tamin'ny tanora ...
Any Kenya, misy vehivavy manova plastika ho volamena
Latsaky ny 30 taona i Lorna Rutto dia namorona sy nitarika ny EcoPost, tanora Kenyan SME izay manova ny fako plastika ho fitaovana. Taratra iray tsy misy fetra ataonao ...